Milkiilaha Iska Leh Inter Miami CF Oo Sheegay Inuu Kooxdiisa Keeni Doono Messi Iyo Ronaldo.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Milkiilaha iska leh Inter Miami CF oo sheegay inuu kooxdiisa keeni doono...
Milkiilaha iska leh Inter Miami CF wuxuu qirtay inuu sameyn doono wax kasta oo uu kari karo si uu ula soo wareego xiddigaha FC Barcelona iyo Juventus mustaqbalka dhow waana labada nin ee dunida ku tartameysay sanadihii lasoo dhaafay.
Inter Miami CF waxay diyaarineysaa sanadkooda ugu fiican ee Major League Soccer waxayna leeyihiin mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan horyaalka oo dhan xilli ciyaareedkii 2021. Ololaha ayaa lagu wadaa inuu bilowdo badhtamaha Abriil oo xilli ciyaareedkooda ka hor uu ku bilowdo toddobaadyo ka hor intii uu macalin cusub u ahaa Phil Neville kaasoo macalin ka noqon doona MLS markii ugu horeysay xirfadiisa.
David Beckham waa milkiilaha inter Miami wuxuuna horey u soo gaday magacyo waa weyn sida Rodolfo Pizarro, Blaise Matuidi iyo Gonzalo Higuaín xilli ciyaareedkii hore. Sannadkan wuxuu awood u yeeshay inuu keeno kabtankii hore ee Stoke City, Ryan Shawcross, xilli ciyaareedkii 2021 MLS wuxuuna doonayaa inuu sii wado inuu kooxda u keeno xiddigo waa weyn sida Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Beckham ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP .
“Laakiin waxaan sidoo kale ognahay in joogitaanka Miami, taageerayaasheena ay doonayaan inay arkaan xiddigaha waa weyn. Waxaan horey u haysanay ciyaartoy sida Gonzalo Higuain iyo Blaise Matuidi kuwaas oo ku daraya iftiinka iyo iftiinka laakiin sidoo kale mustaqbalka waxaan dooneynaa inaan helno fursad aan ku soo qaadanno magacyo waa weyn.
Waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan keenno ciyaartoy waa weyn. Miami waa u soo jiidasho weyn qofkasta iyo ciyaartoydan sida Messi iyo Ronaldo waa nooca aan rajeynayno inaan halkaan ku soo qaadanno. Marka ciyaartoy kasta oo aan la hadalno, waa inaan sameynaa
Previous articlePep guardiola oo ka hadlay hadii uu Aguero Siin doono Waqti uu ku ciyaaro.
Next articlePaolo Maldini oo amaanay daafaca amaahda ku jooga Ac milan ee Tomori